Somalia: Meydka wiil dhalinyaro ah oo laga helay xeebta Liido [Akhriso]
Home Somali News South and Central Somalia: Meydka wiil dhalinyaro ah oo laga helay xeebta Liido
Sida ay sheegayaan wararka laga helaayo Degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir meel ku dhaw Isbitaalka Kaysaney, ayaa laga helay maydka Wiilyar oo badda ay soo tuftay.
Wiilkaan yar maydkiisa waxaa arkay qaar ka mid ah dadka deegaanka oo sheegay saaka aroortii inay ku arkeen xeebta u dhaw Isbitaalka Kaysaney, kadibna ay ku wargeliyeen ciidamada Booliska.Da’ahaan wiilkaan yar ayaa lagu qiyaasay 14-sano jir, waxaana loo maleynayaa inuu ka mid ahaa dhalinyaro shalay u dabaaltagay Xeebta oo badda sidaasi ay ku qaaday.
Laamaha ammaanka Dowladda ayaa durba maydka wiilka dhalinyarada ah halkaasi ka soo qaaday, waxaana loo kaxeeyay dhanka Xarunta Dambi Baarista Ciidanka Booliska Somaliyed ee CID, si halkaasi loogu diiwaangeliyo maydka.
Maamulka Degmada Kaaraan iyo masuuliyiinta Ciidanka ayaa horay uga digay in caruurta laga celiyo badda maalmaha khamiista iyo Jimcaha si aysan ugu geeriyoon badda.
Isbuuc kasta gaba gabadiisa maalinta Jimcaha kumanaan ruux ayaa u dabaal iyo daawasho tago Xeebaha Magaalada Muqdisho, iyadoo dadkaasi ay ka mid yihiin caruurta oo waalidiintooda ka soo dhuunta si ay badda ugu dabaaltagaan.
Waxaa isa soo taraya cabsi laga qabo in 200 oo qof...
Xildhibaanada Baarlamaanka oo mooshin cusub gudbiyay
Sidey Xildhibaannada Golaha Shacabka Ay Uga Hadleen Xaaladda Amniga ?
Maxay yihiin Caqabadaha Heysta Hirshabeelle & Galmudug ?
Baarlamaanka oo Kulan Dhegta loo wada Taagayo Yeelanaya Maanta